Posted by PhyoPhyo at Monday, November 22, 2010 Labels: ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို
ဒီရက်ပိုင်း လူးဘာနဲ့ မတွေ့ရတာ တော်တော့်ကိုကြာနေပြီ၊ မနေ့ကတော့ ကျုပ်ဆီ သူ ဖုန်းဆက်တယ်။ တွေ့ကြပါစို့လို့ သူက ခေါ်တယ်။ လူးဘာကတော့ ဘယ်တော့မဆို ပေါ့ပါးသွက်လက်နေတာပါပဲ၊ ဖုန်းထဲမှာလည်း သူ့အသံက ရွှင်လန်းတက်ကြွဆဲပဲ၊ ကျုပ်ကိုလည်း ခင်ခင်မင်မင်ရှိဆဲ၊ လူးဘာက ကျုပ်ကို အတော်ကြီးခင်ရှာတယ်။ ကျုပ်တို့ အလုပ်တွေကိုယ်စီနဲ့ မအားလို့ မတွေ့ဖြစ်ကြရင်တောင် သူဘာလုပ်လုပ် ကျုပ်ဆီဖုန်းဆက်ပြီးစီကာပတ်ကုံး ပြောပြောနေတော့တာ၊ သူ့ အမျိုးသမီးဆုံးသွားပြီး နောက်တစ်နှစ်မပြည့်ခင် မိန်းမထပ်ယူတော့မယ်ဆိုတော့လည်း ကျုပ်ကိုအရင်ဆုံးပြောပြတာပဲ၊ တိုင်ပင်တာတော့ မဟုတ်ချေဘူး၊ အသိပေးရုံပဲ၊ သူက သူ့စိတ်နဲ့ သူ့ဘာသာ သွက်သွက်လက်လက် ဆုံးဖြတ်တတ်တဲ့သူမျိုး၊ သူ့ရဲ့ ကျန်းမာရေးလည်း အရိပ်တကြည့်ကြည့်နဲ့ အတော့်ကိုဂရုစိုက်တာ။ Mala Krsna ရွာက Najdan circles မှာ မိနစ်၂၀လောက်ရပ်ရင် လေဖြတ်တာပျောက်တယ်၊ အကြောအခြင်တွေကိုက်ခဲတာ၊ အဖျားအနာတွေအတော်များများ ပျောက်ကင်းချမ်းသာနိုင်တယ်။ အဲဒီရွာက စက်ဝိုင်းတွေမှာ ကမ္ဘာမှာ အမဓါတ်ရောင်ခြည် အပြင်းဆုံးနေရာဆိုပဲ၊ တစ်ခါရပ်ပြီးရင် လိုအပ်မယ်ထင်ရင် နောက်နှစ်ပတ်အကြာ ပြန်ရပ်လို့ရတယ်၊ ကိုယ့်အလှည့်ကျဖို့ကို နှစ်ရက်လောက် တန်းစီစောင့်ရသေးတယ်တဲ့၊ သတင်းတွေမှာပါလာတာနဲ့ သူ .. အဲဒီ ရွာကိုသွားဖို့ စုံစမ်းပြီးပြီ၊ ပြီးတော့ ခပ်မြန်မြန်လေး အဲဒီဓါတ်ရောင်ခြည်စက်ဝိုင်းတွေမှာ သွားရပ်တော့တာပဲ၊ ကျုပ်ကတော့ သူ့လောက်မသွက်နိုင်ဘူး၊ ကျုပ်လို နှလုံးထဲ pacemaker ထည့်ထားရတဲ့သူကလည်း အဲဒီနေရာမှာရပ်လို့ မဖြစ်ဘူးတဲ့၊ pacemaker တပ်မထားတောင် သူ့လို အထူးအဆန်းတယ်လည်း စိတ်မ၀င်စားလှပါဘူး၊ ကျုပ်ရဲ့ နေ့တွေတိုင်းက ရိုးရိုးစင်းစင်းပဲ ကုန်ဆုံးသွားတာ၊ စားတဲ့အစားအစာ၊ ၀တ်တဲ့အ၀တ်အစား၊ ဖတ်တဲ့သတင်းစာ၊ နားထောင်တဲ့ သတင်းလိုင်း၊ ကျုပ်အိမ်ကိုလာလည်တဲ့ မိတ်ဆွေ၊ ကျုပ်ကသွားလည်တတ်တဲ့မိတ်ဆွေ၊ မနက်မိုးလင်းလာတာနဲ့ ပြောဖြစ်တဲ့စကားတွေ တစ်နေ့နဲ့ တစ်နေ့ အတူတူပဲ၊ ဘာမှကိုမကွဲပြားတာ၊ မိုးလင်းတာနဲ့"ကောင်းသောမနက်ခင်းပါ" ဆိုတဲ့ နှုတ်ဆက်စကားကအစ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီး "ကောင်းသောညပါ" ဆိုတဲ့ စကားအဆုံး တစ်နေ့တစ်နေ့ပြောဖြစ်တဲ့ စကားလုံးတွေက အဟုတ်ကိုပဲ သိပ်မကွာလှဘူး၊ ယုတ်စွအဆုံး ကျုပ်ရဲ့မိန်းမ၊ သူနဲ့တောင် အိုအောင်မင်းအောင်၊ တကယ့်ကို ရိုးမြေကျပေါင်းရတော့မှာဗျို့၊ ကျုပ်မိန်းမ မာရီယာကလည်း ကျန်းမာလိုက်တာမှ ခေါင်းကိုက်နှာစေးတောင် အင်မတန်ဖြစ်ခဲတတ်တာကိုး၊ ကျုပ်ကမှ နှလုံးမကောင်းလို့ တစ်တစ်တောက်တောက် စက်လေး ထည့်ထားရတာကလား၊ အဲဒီတော့ လူးဘာလို နောက်မိန်းမလေး အပြောင်းအလဲလေးဖြစ်ဖြစ် ယူဖို့ ဘယ်လိုမှ အခွင့်မသာခဲ့ဘူး၊ ဒီလိုနဲ့ပဲ ရိုးရိုးစင်းစင်းနေ့ရက်တွေထဲ ကျုပ် ... မိန်းမအဟောင်းနဲ့ တလှုပ်လှုပ် .. ခရီးဆက်နေရတုန်းပဲ။
ကျုပ်တို့ လူးဘာအိမ်ရှေ့ရောက်တယ် ဆိုတာနဲ့ သူက လမ်းမပေါ်မှာ ခြေကားယား လက်ကားယားရပ်လို့ ကြိုနေပြီ၊ "ဟေး .. မီလန် .. ငါ .. ဒီမှာဟေ့၊ လာဟေ့၊ လာကြဟေ့၊ ကားကို ဒီဘက်မှာရပ်၊ ဟိုဘက်ကို ခေါင်းတည်" လို့ ပြောပြောဆိုဆို ခရီးဦးကြိုပြုတယ်။ ပြီးတော့ “ဘေးက ကားကို..." ဆိုပြီး လူးဘာက အသံနှိမ့်ပြီး ဆက်ပြောတယ်၊ "သတိထားဗျို့၊ ဒီကားက ဘေးအိမ်က ငဂျစ်တစ်ကောင်ရဲ့ကား တန်ဘိုးကြီးတယ်၊ ထိမိခိုက်မိရင်တော့ မလွယ်ဘူး၊ ပြာပြီသာမှတ်" လို့ လမ်းသရဲစကားလုံးဆန်ဆန်လည်း သုံးနှူန်းသေးရဲ့၊ လူးဘာက အမြဲဒီလိုပါပဲ၊ ကျုပ် .. ခပ်ဖွဖွပြုံးလိုက်မိသေးတယ်။ မာရီယာကတော့ တဟားဟားနဲ့ လူးဘာကို သဘောတွေကျနေတော့တာ၊ ကျုပ်တောင် မနာလိုဖြစ်မိတယ်။ ကျုပ်နဲ့များဆို မာရီယာ ဒီလောက်ဟက်ဟက်ပက်ပက်ကြီးရယ်တာ မတွေ့ဖူးပါဘူးဗျာ၊ မိန်းမတွေများ အဲဒါခက်တာပဲ၊ အပြောသွက်သွက်၊ အလှမ်းသွက်သွက်ယောက်ျားများဆို အရည်လဲ့လဲ့ မျက်ဝန်းတွေနဲ့ မျက်စိတဆုံး လိုက်ကြည့်နေတတ်ကြတာ။
လူးဘာက ကျုပ်ပခုံးကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ကြီးဖက်ပြီး သူ့ အိမ်ဆီဆွဲခေါ်တယ်။ ကျုပ်မလည်း သူ့ လို့ လိုက်သွက်နိုင်အောင် မနည်း ကြိုးစားနေရတယ်။ ကျုပ်က လှုပ်လှီလှုပ်လဲ့ရယ်၊ လမ်းကြားလေးကနေ သူ့အိမ်ဆီဝင်ရတယ်၊ ကျုပ်တို့လို့ ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းမဟုတ်ဘူး၊ သူ့ ခြံလေးထဲမှာ ပန်းခြံလေးလည်းရှိတယ်။ ကျုပ်တစ်ခေါက်တော့ရောက်ဖူးပါသေးတယ်။ အခု အိမ်ကိုမွမ်းမံထားတယ်။ အခန်းတွေ သူ့စိတ်ကြိုက် အတွေ့ဆုံးပုံစံပြင်ထားတယ်လို့ ဖုန်းထဲမှာပြောခဲ့သေးတယ်။ ဟုတ်လည်းဟုတ်တယ်။ လူးဘာက ဆိုဖာဆက်တီတွေကိုလည်း တစ်ပတ်တစ်ခါ လောက်ပြောင်းတတ်တယ်။ တသမတ်တည်းဘယ်တော့မှ မထားဘူး။ တစ်မျိုးတည်းကြာကြာမြင်ရရင် စိတ်ငြီးငွေ့ပြီး စိတ်ပျင်းတယ်ဆိုပဲ၊ သူပြောမှပဲ ကျုပ်လည်း စိတ်ပျင်းတယ်ဆိုတာကြားဖူးတော့တာ၊ သူကတော့ စိတ်ပျော်နေအောင် အမြဲ အသစ်အဆန်းလေးတွေနဲ့ လှုပ်ရှားနေရမှ ကျန်းမာသတဲ့၊ ကျုပ်ဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ကျုပ်ဧည့်ခန်းမှာရှိတဲ့ ၀က်သစ်ချသား ဆက်တီအိုကြီးဆို မာရီယာ့အမေ၊ ကျုပ်ယောက္ခမကြီးရှိကတည်းက အဲဒီနေရာမှာပဲ ဒီပုံစံအတိုင်းပဲ အပုံလိုက်ကြီးချထားတာ၊ အခုလည်း ဒီလိုပဲ၊ နောက်လည်း ပြောင်းဖို့ အစီအစဉ်မရှိဘူး။
အိမ်ရှေ့ရောက်လို့ တံခါးလည်းဖွင့်ရော မတိုးမကျယ်သီချင်းသံနဲ့အတူ ခွေးလေးတစ်ကောင် ပြေးထွက်လာတယ်၊ အသံကလည်းစာနေတာပဲ၊ "၀ုတ် ၀ုတ်" တောင်မဟုတ်ဘူး အသံက"အုတ် အုတ်" လို့ အသံသေးသေးလေးနဲ့ ဟောင်တယ်။ ကျုပ်တို့ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တာ တစ်ကိုယ်လုံးကိုခါနေတာပဲကိုး၊ အဲဒီခွေးလေးခါလိုက်တိုင်း သူ့ကိုယ်သေးသေးလေးက အပေါ်ကိုမြောက်မြောက်တက်သွားသေးတာ၊ ခါလိုက် အပေါ်မြောက်တက်လိုက်နဲ့၊ ကျုပ်တို့ကိုယ်ပေါ်ကိုလည်း ခုန်တက်ဖို့ ကြိုးစားသေးတယ်။ ခွေးမလေး နာမည်က လဲ့ရာ တဲ့၊ လူးဘာက သူ့မြင်ကွင်းမှာ ခပ်လှုပ်လှုပ် အရာတွေရှိမှ သဘောကျတာ အဲဒါကိုကြည့်ပါလား၊ ခပ်လှုပ်လှုပ် ခွေးတစ်ကောင်တော့မွေးထားလိုက်သေးတယ်။ ကျုပ်မိန်းမ မာရီယာကတော့ ပြောပါရဲ့၊ ခွေးလေးမွေးရအောင် ကြောင်လေးမွေးရအောင်နဲ့၊ ပူဆာဖူးတယ်၊ ကျုပ်ကလည်း မျက်စိအင်မတန် နောက်တတ်တာ၊ မျက်စိထဲ လှုပ်လှုပ်တွေ မြင်နေရရင်ကို ဒေါသကထွက်လာတော့ မဖြစ်ဘူး၊ ကျုပ်စိတ်တိုရင် အမြီးကကိုင်ပြီး လွှင့်ပစ်မိမှာ၊ နှလုံးထဲထည့်ထားတဲ့ စက်လည်း ကျုပ်ကိုကယ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါနဲ့ပဲ ကျုပ်နှလုံးရောဂါထကြွမှာ စိုးရိမ်လို့ပဲလား၊ ခွေးတွေကြောင်တွေ အမြီးက ကိုင်ပေါက်လွှင့်ပစ်မှာ ကြောက်လို့လားတော့မသိဘူး၊ မာရီယာလည်း နောက်တော့ မပူဆာတော့ပါဘူး။ အသံတိတ်သွားတယ်။
လူးဘာက အပြင်အဆင်ပြောင်းထားတဲ့ အခန်းတွေကိုလိုက်ပြတယ်။ သစ်လွင်တောက်ပနေတာပါပဲ၊ အဘိုးကြီးတစ်ယောက်ပြင်ဆင်ထားတယ် လို့တောင် မထင်ရဘူး။ နံရံမှာသုတ်ထားတဲ့ဆေးရောင်တွေကအစ၊ အသုံးအဆောင်တွေ၊ ပန်းချီကား၊ ပန်းအိုး၊ ဆက်တီအကုန်လုံး စတိုင်ကျကျ လတ်ဆတ်နေတာပဲ၊ သူ့အိမ်က နှစ်ထပ်အိမ်လေး၊ အပေါ်ထပ်ကိုလည်းလိုက်ပြတယ်။ အဲဒီမှာ အခက်တွေ့တာပဲ၊ လူးဘာကတော့ လဲ့ရာကို ပွေ့ချီပြီး တဒုန်း ဒုန်းနဲ့ အိမ်ပေါ်ထပ်ကိုတက်သွားလိုက်တာ လူငယ်လေးတစ်ယောက်လို၊ ကျုပ်မှာ လက်တန်းကို ကိုင်ပြီး ကျုပ်ရဲ့နှလုံးကို အသာအယာချောမော့ပြီး လှုပ်လီလှုပ်လဲ့တက်ရတာ၊ သူကတော့ အိမ်ပေါ်ကနေ ပြုံးပြုံးကြီး ကျုပ်တို့ကို စီးမိုး ကြည့်နေလေရဲ့၊ မာရီယာလည်း လူးဘာလောက်တော့ မသွက်နိုင်ဘူး၊ မာရီယာ့ကိုယ်လုံးက ကျုပ်တို့လက်ထပ်ခါစကအချိန်က ကိုယ်လုံးထက် သုံးဆမကဘူး အချိုးအဆကွာခြားသွားပြီပဲကိုး၊ အပေါ်ထပ်မှာလည်း တစ်ခန်းဝင်တစ်ခန်းထွက် မနားတမ်း လိုက်ကြည့်ရတယ်။ ကျုပ်လည်း.. ရောက်ကတည်းက ခုထိ နားနားနေနေမထိုင်ရသေးဘူး၊ လူးဘာ အိမ်အခင်းအကျင်းလိုက်ကြည့်နေရတာ အတော့်ကိုမောတယ်၊ နောက်တော့ အောက်ထပ်ကိုပြန်ဆင်း၊ အောက်ထပ် အ၀င် ပန်းခြံလေးရှေ့က ဆက်တီမှာထိုင်ကြတယ်၊ အမိုးမှာ မှန်ချပ်တွေတပ်ထားတယ်။ အလင်းရောင်ကလည်းရ၊ နွေးနွေးထွေးထွေးနေလို့ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့နေရာလေးပဲ၊ နေရာမှာ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်ထိုင်ကြမှပဲ လူးဘာကို သေချာကြည့်မိတော့တယ်၊ ဘောင်းဘီက ဒူးအထက်နားအထိအတို၊ တီရှပ်အရောင်လွင်လွင်၊ ရင်ဘတ်မှာ ဒီဇိုင်းလှလှနဲ့၊ အလို .. ခုမှ တွေ့မိရဲ့ .. လူးဘာက ငွေရောင်ရွှေရောင်စပ် လက်ကောက်နဲ့ပါလား၊ တော်တော်ဟုတ်တဲ့လူ၊ အဲ .. လည်ပင်းမှာလည်း ဆွဲကြိုး .. ဆွဲကြိုးလိုအပျော့လည်းမဟုတ်၊ လက်ကောက်လို အမာအကွင်းလိုက်၊ လည်ကောက်လို့ခေါ်ရမယ်၊ ဒါကိုလည်း ခပ်ကြီးကြီး ၀တ်ထားသေးတယ်။ အသားအရည်ကလည်း ရွှန်းရွှန်းစိုစိုနဲ့ လူးဘာကြီးက အသက်သာကြီးရော၊ တကယ့်ကိုနုနုဖတ်ဖတ်ကြီးပဲ၊ ကျုပ်နဲ့များတော့ ကွာခြားပါပေ့၊ မာရီယာဆို တချိန်လုံး ပါးစပ်မပိတ်ဘူး၊ သူ့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ပဲ ခိုးခိုးခစ်ခစ်နဲ့ရယ်မောလို့ လူးဘာ ဘာပြောပြောသဘောအကျကြီး ကျနေတာများဗျာ .. ကျုပ်တောင်ကြည့်မရချင်တော့ဘူး။
ကျုပ်လည်း ရှုသိုးသိုး မေးပစ်လိုက်တယ်။ ဒီတော့မှ လူးဘာကြီး ပြူးပြူးပြာပြာ ကော်ဖီသွားနှပ်တယ်။ ခပ်ကျယ်ကျယ်အော်ပြီး ပြောပြသေးတယ်။ တဟီးဟီးနဲ့လည်းရယ်တယ်။ ဂေါ်ဒါနာစိတ်ကောက်ပြီး သူ့သားအိမ်သွားနေတယ် တဲ့၊ အဲဒါပဲ ဂေါ်ဒါနာကိုလည်း အမြဲမြင်နေရတော့ ရိုးလာလို့ တမင်စိတ်မဆိုး ဆိုးအောင် လုပ်လွှတ်လိုက်တာနေမှာ၊ လူးဘာက ရေခဲသေတ္တာထဲကရှိသမျှ အသီးအနှံတွေယူချလာတယ်။ ကျုပ်မှ အသီးအနှံမကြိုက်ပဲ၊ နောက်တော့ ကျုပ်အသီးအနှံ မကြိုက်တတ်တာ သူသတိရသွားပြီး အသားပြားတွေ။ ကြက်ဥပြုတ်ခြမ်းတွေပါတဲ့ ပန်းကန်တွေဆွဲချလာတယ်၊ ကျုပ်လည်း စားတော့တာပဲ၊ လူးဘာကတော့ ကော်ဖီမသောက်ဘူး၊ ရေတစ်ခွက် ဖန်ခွက်ကြီးနဲ့ ယူလာတယ်။ ပန်းသီးတစ်လုံး ဂျွတ်ကနဲ ကောက်ဝါးတယ်။ ရေဖန်ခွက်ထဲကို ထိပ်ကအလုံးလေးနဲ့ စတီးတံတစ်ချောင်းထည့်မွှေနေတယ်။ ပန်းသီဝါးနေရင်းနဲ့ "ဒါ သံလိုက်ချောင်းလေကွာ၊ ရေဖန်ခွက်ထဲကို ဒီသံလိုက်ချောင်း ၁၀ စက္ကန့်လောက်စိမ်ထား၊ မွှေချင်လည်းမွှေပေါ့၊ ပြီးမှ သောက်ရင် ရေထဲက ဓါတုဓါတ်တွေ လျှော့ချနိုင်တယ်။ ရေအေးဖြစ်ဖြစ်၊ ရေနွေးနွေးဖြစ်ဖြစ်ရတယ်။ ဆူနေတဲ့ရေတော့မသုံးရဘူး၊ သံလိုက်ဓါတ်ပျော်ဝင်နေတဲ့ရေကို သောက်ရင် သွေးလည်ပတ်မှုကောင်းပြီး အကိုက်အခဲတွေပျောက်၊ ကျန်းမာအသက်ရှည်တယ်ဟေ့" လို့ တဆက်တည်းရှင်းပြလိုက်သေးတယ်။
နားထဲမှာ လူးဘာဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းသံ သဲ့သဲ့ဝင်လာတယ်။ သီချင်းနားထောင်ရတာ သီချင်းဆိုရတာလည်း အင်မတန်ကြိုက်တဲ့လူးဘာ၊ သူဖွင့်ထားတဲ့သီချင်းက .. ဘာတဲ့ မက်ဒေါနားသီချင်း Everybody.. "လူတိုင်း.. လာကကြစို့ရဲ့၊ သီချင်းတွေဆိုကြစို့ရဲ့၊ လူတိုင်းပဲ .. နိုးထစမ်းပါ၊ မင်းတို့ရဲ့ ကိစ္စ၀ိစ္စ လုပ်ပါတော့" တဲ့၊ သံစဉ်မြူးမြူး စာသားမြူးမြူးက .. ခပ်မြူးမြူး လူးဘာနဲ့ အစပ်အဟပ်တည့်နေတော့တာပဲ၊ သီချင်းသံနဲ့အတူ ကျုပ်တောင် အတော်လေး မြူးမြူးကြွကြွဖြစ်လာသေးရဲ့၊ ကျုပ်က သီချင်းတော့အကြိုက်သား၊ မက်ဒေါနားဆို အသည်းစွဲ၊ မက်ဒေါနားရဲ့ La Isla Bonita သီချင်းကိုကြိုက်လွန်းလို့ အခါခါနားထောင်ရင်းနဲ့ တခြားသီချင်းတွေပါ အားလုံးလိုလို မှတ်မိကုန်တာလေ၊ နောက်တော့ သူ စာရွက်တွေတစ်ထပ်ကြီး ဆွဲထုတ်လာတယ်။လူ့ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေအကြောင်းရှင်းပြထားတဲ့ ပုံတွေပါတယ်။ သံလိုက်အသုံးအဆောင်တွေအကြောင်းတွေလည်းရေးထားတယ်။ စာရွက်တွေဖတ်ကြည့်နေရင်းက လူးဘာ က ဂုတ်ပိုးဘက် လက်နှစ်ဘက်နှိုက်လိုက်တယ်။လက်ထဲ စတီးတုံးလေးနှစ်တုံးပါလာတယ်။ သံလိုက်တုံးလေးတွေတဲ့၊ အဲဒါတွေ ဂုတ်ပိုးနားမှာ အကျီအတွင်းအပြင်ကပ်ထားရင် ဇက်ကြောတက်တာတွေ သက်သာစေတယ်လို့လည်း ပြောတယ်။ ကျုပ်ကိုပေးတယ်။ စမ်းကြည့်ပါဦးတဲ့၊ ဗိုက်နားဆီ အကျီထဲကိုလည်းနှိုက်တယ်။ သံလိုက်တုံးလေးနှစ်ခု အတွင်းတစ်ခု အကျီအပြင်ကတစ်ခုကပ်ထားတယ်။ ဘောင်းဘီ ဒူးခေါင်းနားမှာလည်း သံလိုက်တုံးလေးတွေ၊ အိုး .. သံလိုက်တုံးတွေ ဟိုကဒီကထွက်လာပါရော့လား၊ နောက် လည်ပင်းကဆွဲကြိုးကိုလည်း ဖြုတ်တယ်၊ ကျုပ်ကို စိတ်မ၀င်စားဘူးလားတဲ့ ပြတယ်။ အဲ ဆွဲကြိုးမဟုတ်ဘူး၊ လည်ကောက်ပေါ့၊ အဲဒါကလဲ တိုက်တေနီယမ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ သံလိုက်လည်ကောက်ဆိုပဲ၊ နားထဲ သီချင်းနောက်ထပ်တစ်ပုဒ် စာသားကြားလိုက်မိသေးရဲ့၊ "မင်းက ငါ့ရဲ့ကံကောင်းတဲ့ကြယ်လေးဖြစ်ရမယ်၊ မင်း ဘယ်နေရာကပဲဖြစ်ဖြစ် ငါ့ကိုအလင်းတွေပေး၊ တောက်ပလင်းလက်စေတာကြောင့်ပေါ့" တဲ့၊ Lucky Star ဆိုတဲ့သီချင်း၊ ကျုပ်လည်း ပိုမြူးလာတယ်၊ လူးဘာဧည့်ခံတဲ့ ဘရန်ဒီကလည်း အစွမ်းပြစပြုလာပြီ။ လူးဘာက ဘာအရက်သေစာမှ မသောက်ဘူး၊ အယ်လကိုဟောနည်းနည်းလေးပါတာတောင် မသောက်တတ်တဲ့သူကြီးပါ၊ သူအကြိုက်ဆုံး အရည် က "ရေ" တဲ့၊ သူ ခဏခဏပြောဖူးတယ်၊ သူငယ်ချင်းတွေဆုံကြတိုင်း ဘရန်ဒီ၊ ၀ီစကီ၊ ရမ်၊ ဘီယာ အယ်လ်ကိုဟောမျိုးစုံနဲ့ မူးယစ်ဝေသီနေကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ လူးဘာကတော့ ရေတစ်ဖန်ခွက်ပြီး တစ်ဖန်ခွက်သောက်ရင်း အမြဲ လန်းဆန်းတက်ကြွစွာရှိနေတတ်တာပါပဲ။
ကျုပ်လည်း သံလိုက်တုံးတွေအကြောင်းရေးထားတဲ့ စာရွက်တွေဖတ်တယ်။ ဇီဝလျှပ်စီးသံလိုက်ကုထုံးတဲ့၊ သံလိုက်အသုံးအဆောင်တွေက ကိုယ်ခန္ဓာမှာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေကို ကုသဖို့အသုံးပြုတဲ့ ကုသနည်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ အဲဒီ ဇီဝလျှပ်စီးသံလိုက်ကုထုံးဟာ ကျုပ်တို့ကိုယ်ခန္ဓာက ကိုယ်ပိုင်လျှပ်စစ်ဓါတ်နဲ့ လူ့အရေပြားမျက်နှာပြင်ပေါ်က အပ်စိုက်ကုကြတဲ့အမှတ်အသား နေရာတလျှောက် သံလိုက်စက်ကွင်းတွေပေါ်မှာ ချဉ်းကပ်ပြီး အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုပဲ၊ ဖျားနာခြင်းတွေနဲ့ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုတွေက လူ့ကိုယ်ကလျှပ်စစ်ဓါတ်တွေနဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းတွေ အဆီအငေါ်မတည့်တာနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ရေးထားသေးရဲ့၊ ဒီ သံလိုက်ကုထုံးကတော့ အဆီအငေါ်မတည့်တာတွေကို ပြန်ပြီးထိန်းညှိပေးတယ်။ လျှစ်စစ်ဓါတ်တွေ ပုံမှန်ဖြစ်အောင် ကူညီပေးတယ်တဲ့၊ အောက်စီဂျင်သယ်ပေးတဲ့ သွေးပရိုတိန်း ဟေမိုဂလိုဘင်ရဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းယန္တရားအားနည်းလာပြီဆို ဒီလိုသံလိုက်ကုထုံးကို အသုံးပြုရတယ်။ သွေးလည်ပတ်စီးဆင်းမှုကို တိုင်းတာပြီး အထောက်အပံ့ပေးသေးတယ် ဆိုပဲ၊ ကျုပ်တော့ နားလည်အောင်မနည်းကြီး ဖတ်မှတ်နေရတယ်။ ကျုပ်နားထဲမတော့ နောက်ထပ်သီချင်းတစ်ပုဒ်က တိုးဝင်ပြန်တယ်။ Express yourself ဆိုတဲ့သီချင်း၊ စာသားတွေက သိပ်ကောင်းပေါ့၊ "မင်း ... စိန်လက်စွပ်တွေမလိုပါဘူးကွယ်၊ ဒါမှမဟုတ် ၁၈ကာရက်ရွှေတွေလည်းမလိုပါဘူး၊ ဖန်စီကားတွေဆိုတာလည်း သိပ်မြန်တာပဲ၊ မင်းသိပါတယ်၊ အဲဒါတွေက ဘယ်တော့မှကို အဆုံးသတ်တယ်ရယ်မရှိဘူး၊ မင်းလိုတာဘာလဲဆိုတော့ ကြံ့ခိုင်သန်မာတဲ့လက်တစ်စုံပါပဲ၊ မင်းကိုမင်းမြှင့်တင်ဖို့၊ မင်းကိုမင်း ပလ္လင်ထက်က ဘုရင်မလေးအသွင်ခံစားနိုင်မိစေဖို့၊ သူ .. မင်းကို ချစ်ပါစေကွယ်" ပြီးတော့ စာသားလေးက သိပ်ကောင်းတာဗျို့၊ "သူ .. ဘယ်လိုခံစားရတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြပါစေလား၊ ပြီးတော့ မင်းသိလာနိုင်တာပဲ၊ မင်းအချစ်က ဘယ်လောက်စစ်မှန်သလဲဆိုတာကိုပေါ့" အိုး ကျုပ်သိပ်ကြိုက်တဲ့ စာသားတွေ၊ သီချင်းတွေက လူကို အားဖြစ်စေတယ်၊ ကျုပ်က တခြားဘယ်ကမှ အားမယူနိုင်တော့ ဒီလို သီချင်းအမိုက်စားလေးတွေနားထောင်ပြီး အားယူ အသက်ဆက်နေရတာဗျို့၊ လူးဘာကတော့ နည်းမျိုးစုံနဲ့ သူ့ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုးမွေးသလို ပြုစုစောင့်ရှောက်နေတာကလား။
ကျုပ်လည်း ဗဟုသုတရအောင်တော့ လေ့လာထားဦးမှ၊ လူးဘာကိုမေးရတယ်။ ဒီ သံလိုက်ကုထုံးသမိုင်းကြောင်းစာရွက်ပေးပါဦး ဆိုတော့ သူ အိမ်ထဲဝင်သွားပြန်တယ်။ နောက်ထပ် ရောင်စုံစာရွက်တစ်ထပ် ဆွဲထုတ်လာပြန်တယ်။ "သမိုင်းကြောင်းကတော့ နှစ်မျိုး သုံးမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒီမှာဖတ်ကြည့်တစ်မျိုး" လို့ လူးဘာကဆိုတယ်၊ လူးဘာပေးတဲ့စာရွက်မှာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၅၀၀ကျော်ခန့်(၁၅ရာစု)က ဆွဇ်ဆေးဆရာ၊ ၀ိဇ္ဇာဇော်ဂျီ ပါရာဆဲလ်စာ့ဟာ သံလိုက်ကျောက် ဒါမှမဟုတ် သံလိုက်ဓါတ်ရှိနေတဲ့ သဘာဝသတ္ထုအပိုင်းအစတွေကိုအသုံးပြုပြီး ၀က်ရုးပြန်ရောဂါ၊ ၀မ်းသွား၊ သွေးယိုစီးရောဂါတွေ ကုသပေးခဲ့တယ်လို့ရေးထားတယ်။ သံလိုက်ရဲ့အစွမ်းအစဟာ သံဓါတ်ကို ဆွဲဆောင်နိုင်တယ်လို့ သိရှိခဲ့တယ်။ လူ့ကိုယ်ခန္ဓာကနေ ရောဂါတွေကို အဝေးကို ဆွဲငင်ယူပစ်နိုင်တယ် လို့ အဲဒီဆေးဆရာ ပါရာဆဲလ်စာ့က ယုံကြည်ခဲ့တယ် တဲ့။ ၁၈ရာစုမှာတော့ သြစတြီးယန်းဆေးဆရာ ဖရန့်ဇ်အန်တွန်မက်စ်မာ က လူနာတွေရဲ့ပွင့်နေတဲ့သွေးပြန်ကြောမှာ သံလိုက်ကိုဖြတ်သန်းစေပြီး ရောဂါတွေကို ကုသနိုင်တဲ့ "သံလိုက်ဓါတ်ပညာရပ်"ကို စတင်ခဲ့တယ်။ ပါရီမြို့မှာ သံလိုက်နဲ့ကုသပေးတဲ့ ဆေးခန်းစတင်ဖွင့်ခဲ့တယ် လို့ဆိုတယ်။ ၁၉ရာစု အလယ်ပိုင်းမှာ သံလိုက်ဓါတ်ပါတဲ့လိမ်းဆေးတစ်မျိုး နယူးယောက်ဈေးကွက်မှာ စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တယ်ဆိုပဲ၊ အဲဒီလိမ်းဆေးဟာ ခေါင်းကိုက်၊ အူမကြီးယောင်၊ အဆစ်အမြစ်အကြောအခြင်ရောင်ရမ်း၊ နှာစေး၊ ဂေါက်ရောဂါနဲ့ သွားကိုက်တာတွေတောင် ပျောက်ကင်းတယ်လို့ ရေးထား သေးတယ်။ အိုး .. ဒီသံလိုက်တုံးတွေနဲ့ ပျောက်ကင်းတဲ့ရောဂါတွေကလည်း များပဲများလှချည့်။
နောက်တော့ ၁၈၄၁ခုနှစ်မှာ အရိုးကုထုံးအတွက် တစ်ဆင့်တက်လေ့လာခဲ့တယ်။ ၁၉၅၀ခန့်မှာ ဂျပန်ဆေးပညာရှင် ဖူကာဒါ၊ ယာဆူဒါတို့က အရိုးကြီးထွားမှုနဲ့ လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓါတ်တွေ ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အကြောင်းတွေ ပြင်းပြင်းထန်ထန် လေ့လာခဲ့ကြတယ် လို့ ဆိုတယ်။ ၁၉၇၄ခုနှစ်မှာ သြစတြီးယန်းဆရာဝန်အလန်ဒွိုင်းယာက အရိုးဝေဒနာရှင် ၁၂ဦးခန့်ကိုသံလိုက်ကုထုံးနဲ့ ကုသပေးခဲ့တယ်တဲ့၊ အရိုးကြီးထွားမှုအတွက်လည်း သံလိုက်တုံးတွေ သုံးကြသေးသတဲ့၊ ပညာရှင်တွေများ အဲသလို ကြံကြံဖန်ဖန် တီထွင်ကြံဆနေကြတာပဲကိုး။ ၁၉၇၉ခုနှစ်မှာ FDA က အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီး အခုလက်ရှိ ဂျပန်၊ တရုတ်၊ သြစတြေးလျနဲ့ ဂျာမနီနိုင်ငံတွေမှာ သံလိုက်ကုထုံးကို တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးပြုနေတယ်ဆိုပဲ၊ ယူအက်စ်နဲ့ မက်ဆီကိုမှာလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာတွေကိုတောင် သံလိုက်ကုထုံးနဲ့ ကုသနေကြပြီး အောင်မြင်မှုနှုန်းကလည်းမြင့်တယ်လို့ အဲဒီကြော်ငြာစာရွက်တွေမှာ ရေးသားထားကြတယ်။ နားထဲ သီချင်းသံ တိုးဝင်ပြန်တယ်။ အိုး .. ကျုပ်အကြိုက် La Isla Bonita သီချင်း "ငါ မနေ့က ဆန်ပက်ဒရိုအကြောင်းအိပ်မက် မက်တယ်" တဲ့၊ ဆန်ပက်ဒရိုက ဒဏ္ဍရီထဲက စပိန်ကျွန်းလေးတစ်ကျွန်းပေါ့၊ “အပူပိုင်းဒေသကျွန်းလေးမှာ လေပြည်ညှင်းတွေက တဖြူးဖြူး၊ အရိုင်းဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ် ရှိလိုက်ပါဘိရဲ့၊ အဲဒီနေရာက ငါ တမ်းတနေခဲ့ရတဲ့နေရာလေးပဲ .. ကျွန်းငယ်လေးရယ်၊ ပြီးတော့ စန်ဘာအက မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင်ကကြတဲ့အခါ၊ နေမင်းကြီးလည်း မြင့်သထက်မြင့်လာဦးမှာ၊ အသံသာသာတွေ ငါ့နားတလျှောက် တိုးဝင်ဖြတ်သန်းသွားပြီး မျက်စိထဲအထိ ခရီးဆန့်ကြပြီ၊ မင်းရဲ့ စပိန်သားချော့တေးသံလေးပေါ့" တဲ့၊ ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်သလဲ၊ အိမ်မှာဆို ကျုပ်ဒီလိုသီချင်း အေးအေးဆေးဆေး နားမထောင်ရဘူး၊ ကျုပ်ကလည်းဖွင့်ပြီဆိုမှတော့ ကြားသာအောင် ခပ်လွင်လွင်လေးဖွင့်ချင်တာ၊ မာရီယာက သီချင်းရယ်လို့လည်းမကြိုက်၊ သူက နားမခံနိုင်တာနဲ့ပဲ ကျုပ်မလည်း မဖွင့်ရဘူး၊ ဒီလိုနဲ့ ကျုပ် .. တစ်နေ့တစ်နေ့ ရိုးရိုးစင်းစင်းကြီးကို အိုမင်းလာတာပေါ့၊ မဟုတ်ဘူးလား။
ကျုပ် ပုခုံးကိုပဲ တွန့်ပြလိုက်တယ်။ လူးဘာက ဟက်ကနဲ တစ်ချက်ရယ်တယ်။
တကယ်တမ်း ဒီသံလိုက်တုံးတွေ အစွမ်းထက်မထက် ကျုပ် .. မသိပါဘူး၊ လူးဘာဆီ လာလည်တဲ့ တခဏလေးမှာပဲ ကျုပ် စိတ်တွေ လန်းဆန်းလာတာတော့ သေသေချာချာကြီးကို သိလိုက်တယ်။ သီချင်းသံတွေနဲ့ လူးဘာပတ်ဝန်းကျင်က ခပ်လှုပ်လှုပ်တွေကြောင့်လေ။
လူးဘာရဲ့ကိုယ်ပေါ်က သံလိုက်တုံးတွေ ... သံလိုက်တုံးတွေက ကျုပ်ရဲ့စိတ်ကို ညျိ့ငင်နိုင်စွမ်းမရှိကြပါဘူး၊ ကျုပ်ကို ရုန်းမရအောင် ဆွဲငင်နေခဲ့ကြတဲ့ သံလိုက်ဓါတ်တွေကတော့ လူးဘာရဲ့ကိုယ်ပိုင်သံလိုက်စက်ကွင်းဆီက ထွက်ပေါ်နေကြတာ။
ပုံစံမျိုးစုံနဲ့ သံလိုက်တုံးတွေ အစွမ်းထက်မထက်ဆိုတာထက် လူးဘာရဲ့ပုံစံကိုပဲ အားကျမိနေတယ်၊ လူးဘာရဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံ၊ အစားအသောက်၊ စိတ်ပျော်ရွှင်အောင် ပြုစုပျိုးထောင်မှုတွေ .. အဲဒါတွေ အားလုံး ဟန်ချက်ညီညီ စည်းဝါးတကျရှိနေတာကြောင့် သူ .. နုပျိုကျန်းမာနေတာလို့ပဲ ကျုပ်ကတော့ ထင်မိတာပါပဲ။ ။
ဖြိုးဖြိုး(လှိုင်းသစ်မဂ္ဂဇင်း၊ ဇွန်လ ၂၀၁၁)
Posted by PhyoPhyo at Monday, November 22, 2010 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
Posted by PhyoPhyo at Saturday, November 13, 2010 Labels: အထွေထွေမှတ်စု, အပျော်ဆုံးနေ့
Posted by PhyoPhyo at Friday, November 12, 2010 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, November 09, 2010 Labels: ဟိုဟို ဒီဒီ
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, November 02, 2010 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
♫ Somewhere in the world there is peace of mind.
Somewhere in the world there'saplace for me in this world. ♪
♪ Somewhere in the world there is peace of mind.
Somewhere in the world there'saplace for me in this world. ♫
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, October 27, 2010 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
အကို“ရရ”က သီချင်းဆိုတာ အားကြီးဝါသနာပါတယ်၊ သူဆိုထားတဲ့ သီချင်းတွေ ခဏခဏပို့ပေးတတ်တယ်၊
ဂရေဟမ်၊ ၀ိုင်ဝိုင်းသီချင်းတွေ တခြားအဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းတွေလည်းပါတယ်၊ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေလည်းပါတယ်၊ ကိုယ်ကမအားတဲ့အခါ “ဘယ်သီချင်းက ဘယ်လိုကောင်းပါတယ်” ချီးမွမ်းဖို့ မေ့သွားတတ်တယ်၊ အိမ်မှာတော့ တစ်ခုခုလုပ်နေလည်း သူ့သီချင်းတွေ ဖွင့်နားထောင်ပါတယ်၊ ခဏခဏလည်းနားထောင်တယ်၊ ကြိုက်လည်းကြိုက်ပါတယ်၊ သူ့ကိုတော့ မပြောမိဘူး၊
သူက အဲဒါကို စိတ်ကောက်မယ်ထင်ပါတယ်၊
ဒီ ဖိုင်လေးနဲ့ သူ စိတ်ကောက်ပြေကောင်းပါရဲ့ ...
Let It Snow ကိုတော့ အကြိုက်ဆုံးပဲ
မြန်မာနိုင်ငံရော၊ နိုင်ငံတိုင်း အေးအေးချမ်းချမ်းရှိကြပါစေ
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, October 26, 2010 Labels: ဟိုဟို ဒီဒီ
ကျွန်တော်တို့အကြောင်း ဖတ်ချင်ရင်ပါ !!!
Posted by PhyoPhyo at Friday, October 22, 2010 Labels: ပုံပြင်ထဲကကျွန်မတို့တွေ
ပြီးတော့ ဂရိပုံပြင်တစ်ပုဒ်လည်း ပြောပြဖူးပါတယ်၊ “အရိယာဒ့်နဲ့ချည်မျှင်” တဲ့
ဂရိပုံပြင်ထဲက ခရိတ်ကျွန်း(Kait)မှာ လာဘရင့်ဆိုတဲ့ ရဲတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်၊ ရဲတိုက်ကြီးအနီးမှာ ရွာတစ်ရွာရှိတယ်တဲ့၊ အဲဒီရွာက လူတွေဟာ လာဘရင့်ဆိုတဲ့ ရဲတိုက်ကြီးကို သိပ်ပြီးကြောက်လန့်နေကြရတယ်၊ လာဘရင့်လို့ အသံထွက်ပြီး မပြောရဲလောက်အောင် တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားနေကြတယ်တဲ့၊ အဲဒီရဲတိုက်ကြီး က လူတိုင်းအတွက် အင်မတန်အန္တရာယ်ကြီးတယ်၊ ရဲတိုက်ထဲများရောက်လိုက်ပြီဆို အပြင်ပြန်ပြီးထွက်လို့ မလွယ်အောင် လမ်းသွယ်တွေအမျိုးမျိုးရှိတယ်၊ အတွင်းမှာ ၀င်္ကပါကြီးရှိတယ်၊ လာဘရင့်ရဲတိုက်ကြီးကို ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူက လူစင်စစ်မဟုတ်ဘူး၊ မီနိုတားရ်လို့ခေါ်တဲ့ လူတစ်ပိုင်း၊ နွားရိုင်းတစ်ပိုင်း သတ္တ၀ါကြီးတဲ့၊ လူစင်စစ်မဟုတ်လို့လည်း ရွာသားတွေအားလုံးက ကြောက်လန့်နေကြရတာပေါ့၊ ကိုယ်ခန္ဓာကတော့ လူအတိုင်းပါပဲ၊ ခြေလက်တွေက ပုံမှန်လူသားလိုပဲ၊ ဦးခေါင်းကြီးကသာ နွားရိုင်းကြီးရဲ့ ဦးခေါင်းအကြီးကြီးနဲ့ ကြောက်စရာသိပ်ကောင်းတယ်တဲ့၊ ရဲတိုက်ထဲကနေများ သူ ဟိန်း ဟောက်လိုက်ပြီဆို ရွာသားတွေခမြာ ဖိန့်ဖိန့်တုန်အောင်ကြောက်လန့်ကြတယ်၊ အိမ်ထဲမှာ ပုန်းပြီးနေကြရတယ်၊ သူ့ကိုလည်း အခွန်မှန်မှန် ပေးရသေးတယ်ဆိုပဲ၊ အခွန်အခကလည်း တယ်ပြီး ကြီးတယ်တဲ့၊ အဖိုးတန်ရွှေတွေနဲ့ လူတွေပါ ပေးရသတဲ့၊ ရွှေကိုယူတယ် လူတွေကိုတော့ ကိုက်ဝါးစားသောက်ပစ်တာပေါ့။
ပုံပြင်ထဲက ကျွန်မတို့တွေ (ပုတ်သင်ညိုလေးနဲ့ အသုံးမ၀င်တဲ့ရတနာ)
တစ်ခါက ရွာတစ်ရွာမှာ ကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်၊ အဲဒီရွာလေးမှာက အများစုကဆင်းရဲကြတယ်တဲ့၊ ဘုန်းတော်ကြီးက သူတတ်နိုင်သလောက် ရွာသူရွာသားတွေကို နေ့တိုင်း ပေါင်မုန့်တွေ ဝေငှပေးကမ်းတာပေါ့၊ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့ကျတော့ အ၀တ်အစားနွမ်းနွမ်းလျလျ ၀တ်ထားတဲ့ ရွာသားတစ်ဦးက ဘုန်းတော်ကြီးအရှေ့ရောက်လာပြီး ခြေအစုံရပ်လို့ “အကူအညီတောင်းပါရစေ ဘုန်းတော်ကြီးခင်ဗျား” လို့ ပြောသတဲ့၊ ဘုန်းတော်ကြီးက ပြောပါပေါ့၊ အဲဒီ ရွာသားက “ကျွန်တော်က ဂျုံစိုက်တဲ့သူတစ်ဦးပါ ဒီနှစ်မှာ ဂျုံစိုက်ခင်းတွေလည်း မအောင်မြင်၊ အိမ်မှာကလည်း ကျွန်တော့်မိန်းမက ဖျားနာနေပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကလေးတွေလည်း စားစရာ ပေါင်မုန့်၊ နွားနို့မရှိတာနဲ့ ဒီလိုသာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ငတ်ပြီး သေရပါတော့မယ်၊ ဘုန်းတော်ကြီး ကူညီပါဦး” လို့ ငိုကြွေးပြီးပြောတယ်၊ ဘုန်းတော်ကြီးက အေးဆေးဆေးဆေးပါပဲ၊ အနီးအနား လမ်းပေါ်မှာသွားနေတဲ့ ပုတ်သင်ညိုတစ်ကောင်ကို ကောက်ယူလိုက်ပြီး အဲဒီရွာသားရဲ့ လက်ဝါးကိုတင်ပေးလိုက်တယ်တဲ့၊ ပုတ်သင်ညိုလေးက ချက်ချင်းပဲ အဖိုးတန်ကျောက်မျက်ရတနာဖြစ်သွားတယ်၊ ဘုန်းတော်ကြီးက ပြောရှာတယ်၊ အဲဒီ ရတနာကိုထုခွဲရောင်းချပြီး လိုသလို သုံးချည်ပါ လို့ ပြောပြီးပေးလိုက်တယ်တဲ့၊ ရွာသားလေးလည်း ၀မ်းသာအားရနဲ့ ချက်ချင်းထုခွဲရောင်းချပြီး ပေါင်မုန့်တွေ နွားနို့တွေဝယ်ခြမ်းတယ်၊ ဆရာဝန်တစ်ဦးကိုလည်း အမြန်ပင့်ပြီး အိမ်ကို အပြေးပြန်တာပေါ့၊ “သားတို့ သမီးတို့ရေ ဟောဒီမှာ အဖေ ပေါင်မုန့်ရလာပြီကွဲ့၊ မိန်းမရေ ငါတော့ ဆရာဝန် ပင့်လာတယ်ကွဲ့၊ မင်း .. နေကောင်းတော့မကွဲ့” လို့ ၀မ်းသာအားရ ပြောရှာတာပေါ့၊ ကလေးတွေလည်း ဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာနဲ့ စားကြသောက်ကြ၊ မိန်းမလည်း နောက်တော့နေကောင်းသွားတယ်တဲ့၊ ကျန်တဲ့ ငွေကြေးတွေကိုလည်း နွားတွေ၊ ဆိတ်တွေဝယ်၊ ဂျုံစေ့တွေထပ်ဝယ်လို့ ဂျုံပင်တွေ စိုက်ကြပျိုးကြနဲ့ အလုပ်ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်ကိုင်ကြတယ်။
ဖေဖေ့ရဲ့ “ဒုတ်ထောက်မင်းသား ပုံပြင်”
ရှေးရှေးတုံးက တက္ကသိုလ်ပြည်မှာ အတိုင်းတိုင်း အပြည်ပြည်က ရောက်လာကြတဲ့ မင်းညီမင်းသားတွေကို မင်းတို့ တတ်အပ်တဲ့ အဋ္ဌာရဿ (၁၈)ပါး သင်ကြားပေးတဲ့ ဒီဿာပါမောက္ခဆရာကြီးတဦးရှိတယ်တဲ့၊ သူ့ မှာ ကောင်းခြင်းငါးဖြာ ကြန်အင်လက္ခဏာနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ သမီးတော် တစ်ပါးလည်း ရှိသတဲ့၊ နက္ခတ်အလိုအရရော၊ ဇာတာအလိုအရပါ မိဖုရားကြီးတစ်ပါးဖြစ်မယ်ဆိုတာ ယုံကြည်ထားတဲ့အတွက် သမီးတော်ကို မင်းသား တစ်ပါးပါးနဲ့ လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးလိုတဲ့ ဆန္ဒလည်းသူ့မှာရှိတယ်၊ ပညာသင်နှစ်ကုန်ဆုံးလို့ ပြည်တော်ပြန်ကာနီးမှာ ဆရာကြီးက မင်းညီမင်းသားများအားလုံး ရှေ့တော်မှာစုရုံးစေပြီး ကြေညာချက်တစ်ရပ် ထုတ်ပြန်သတဲ့၊ အဲ့ဒီကြေညာချက်က ငါ့သမီးတော်ကို အလိုရှိသူ ဘယ်မင်းသားမဆို ဓါးလှံလက်နက်သားရဲတွင်းထဲ ခုန်ဆင်းနိုင်စွမ်းရှိရင် လက်ထပ်ထိမ်းမြားပေးစားမယ် ဆိုတာပါပဲ။
ပြီးတော့ မြွေမင်းသားပုံပြင်ပေါ့၊ ဒီပုံပြင်လေးကိုလည်း မေမေ ခဏခဏပြောပြရတာပါပဲ၊
ရှေးရှေးတုံးက ရွာတစ်ရွာမှာ ခ၀ါသည် အဖိုးကြီးအဖွားကြီး နှစ်ယောက်ရှိသတဲ့၊ သူတို့မှာ မကြီး မလတ် မထွေးလေးဆိုပြီး သမီး ၃ ယောက်ရှိသတဲ့၊ သူတို့နှစ်ဦးဟာ နေ့စဉ် နေ့တိုင်း မြစ်ဆိပ်ကို အ၀တ်လျှော်ထွက်ရသတဲ့၊ တစ်နေ့တော့ သူတို့နှစ်ဦး မြစ်ထဲမှာ အ၀တ်လျှော်နေတုန်း ရေထဲမှာ .. သဖန်းခိုင်ကြီးတစ်ခိုင် မျောလာတာကိုး၊ အဖွားက “အဖိုးရယ် .. ဆင်းဆယ်လိုက်ပါ” ဆိုတော့ အဖိုးက ထုံပေပေနဲ့ငြိမ်နေသတဲ့၊ ဒါနဲ့ စိတ်မရှည်တဲ့ အဖွားက ဗြတ် .. ဗြတ် .. နဲ့ ဆင်းဆယ်လိုက်တော့ သဖန်းသီးခိုင်ကြီး လက်ထဲ ပါလာတာပေါ့၊ သဖန်းသီးကြီးတွေက ၀င်းအိနေတာပဲ တဲ့၊ အိမ်ရောက်မှ သမီးတွေကို ကျွေးရမယ် ဆိုပြီး အဖွားက တစ်လုံး ဆွတ်မြည်းလိုက်တယ်၊ “အဖိုးရယ် .. ချိုလှချည်ရဲ့ .. ရော့ .. တစ်လုံး၊ မြည်းကြည့်စမ်း” ဆိုပြီး ပေးသတဲ့၊ အဖိုးလဲ ချို လှ .. ချို လှနဲ့စားလို့တစ်ခိုင်လည်းကုန်ရော ဗြုန်းဆို ရေထဲက မြွေကြီးတကောင် ဧရာမကြီး ရေကူးလိုက်လာတာမြင်ရောတဲ့၊ ဒါနဲ့ အဖိုးရော အဖွားရော အ၀တ်တွေ ကပြာကရာ စုထုပ်ပြီး အမြန် အိမ်ပြန်ပြေးကြတာပေါ့၊ မြွေကြီးက သူတို့နှစ်ဦးကို မဲ လိုက်နေတယ်ဆိုတာ သူတို့ သိနေတာကိုး၊ မြွေကြီးကလိုက် သူတို့က ပြေး နဲ့ တော်တော် အဝေးရောက်တော့ သစ်ငုတ်တိုတစ်ခု နဲ့ တွေ့ သတဲ့၊ ဒါနဲ့ အဖိုးက “သစ်ငုတ်တိုကြီးရယ် မြွေကြီးများလိုက်လာရင် ကျုပ်တို့ဒီလမ်းက သွားတယ်လို့ မပြောလိုက်ပါနဲ့၊ ရော့ နင်စားဖို့သဖန်းသီးတစ်လုံး” လို့ ပေးလဲ ပေး ပြေးလဲ ပြေးကြတာပေါ့၊ ရှေ့မှာတစ်ခါ တွေ့တဲ့ သူတိုင်းကို သဖန်းသီး တစ်လုံးကျပေးရင်း သူတို့ ဒီလမ်းက မသွားဘူးဆိုတာပြောဖို့ မှာခဲ့တာပေါ့၊ ဒါနဲ့ သူတို့ အိမ်ကိုရောက်တော့ သမီး ၃ ယောက်ကိုခေါ်ပြီး ဝေစားဖို့ ပြောရင်း သဖန်းခိုင်ကြီးကိုပေးသတဲ့၊ မကြီး၊ မလတ်နဲ့မထွေးလေးတို့လည်း ပျော်ပျော်ပါးပါး စားနေကြတာပေါ့၊ သဖန်းသီးကလည်း သိပ်ချိုတာကိုး၊
နောက်ပြီး မောင်နီနဲ့မစီပုံပြင် .. ကြေးဖလားလေးခေါင်းဆောင်းတာဆို ခဏခဏအမှတ်ရမိတယ်၊ သနားလည်း သနားလို့၊ မောင်နီလေးက နဂါးလေးဖြစ်သွားရှာတာ ...
“နှမမုံ့ရောင်း မောင်မုံ့ထောင်း။ ကြေးဖလားလေးဆောင်း” တဲ့၊ အဲဒီလို မေမေက သီချင်းလေးလို ရွတ်ပြတတ်သေးတယ်၊ ဟိုး .. ရှေးရှေးတုံးက ရွာတရွာမှာ အဖိုး အဖွား ဇနီးမောင်နှံ ၂ ယောက် ရှိကြတယ်၊ သူတို့ မှာအရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မောင်နီဆိုတဲ့ သားတစ်ယောက်နဲ့ မစီဆိုတဲ့ သမီးတစ်ယောက်လည်းရှိတယ်၊ တစ်နေ့မှာ မမျှော်လင့်ပဲဇနီးဖြစ်သူ ကွယ်လွန်သွားပါတယ်၊ ကလေး ၂ယောက်နဲ့ကျန်ရစ်ခဲ့ရာမှာ အလုပ်အကျွေးပြုစုမယ့် သူလိုနေတာကြောင့် နောက်အိမ်ထောင် ထူထောင်လိုက်ပါရော ကွယ်၊ နောက်မိန်းမက ကလေးနှစ်ယောက်ကို မကြည်ဖြူနိုင်ပါဘူး .. တဲ့၊ အမြဲပဲ တကျီကျီနဲ့၊ တောထဲ သွားစွန့်ပစ်ဖို့ ဆူဆူပူပူလုပ်လိုက်၊ ချော့ချော့မော့မော့ ပြောလိုက်နဲ့ တိုက်တွန်ုး နားသွင်းနေလေ့ရှိတယ်၊ အဲဒါနဲ့ အဖိုးလည်း စိတ်ပေါက်ပေါက်နဲ့ ခလေးနှစ်ယောက်ကို လှည့်ဖျားခေါ်သွားပြီး ... တောထဲရောက်တော့ “သားတို့သမီးတို့ဒီမှာ နားနေကြအုံး .. ခဏနေရင် လာခေါ်မယ်” ဆိုပြီး သူ့မိန်းမရှိရာ အိမ်ကို ပြန်ပြေးပါလေရော၊ မိုးချုပ်ခါနီးတဲ့ တိုင်အောင် လာမခေါ်တော့ မောင်လုပ်သူက ကြောက်လာတာပေါ့၊
မေမေပြောပြတဲ့ ဟန်ဆဲလ် နဲ့ ဂရဲတဲလ် ...
တောရွာလေးတရွာမှာ အဖေရယ် အမေရယ် သားလေး Hansel ရယ် သမီးလေး Gretelရယ်ရှိကြတယ်ကွဲ့၊ အော်... အခုပြောပြမှာက ပြဇာတ်ကွဲ့၊ (အဲဒီတုန်းက မေမေက သူ .. ငယ်ငယ်က သင်ခဲ့တဲ့ ပြဇာတ်တိုလေးတွေကို အပိုင်းလိုက်ပြောပြခဲ့တာ)၊ မေမေ ငယ်ငယ်က Wesley ကျောင်းမှာနေစဉ် သင်ရတဲ့reader 1 လား2လား မမှတ်မိတော့ဘူး၊ စာအုပ်ထဲ က ပြဇာတ်တိုလေးပေါ့။ Hansel & Gretel တဲ့၊ (အဲဒီလိုလဲ ရှင်းပြခဲ့သေးတယ်)
အဲဒါနဲ့ ပြောရရင် ပြကွက် ( ၁) ဟန်ဆဲလ်တို့ အမေက မီးဖိုနားမှာ ခုံကလေးနဲ့ ထိုင်ပြီး အပ်ချုပ်နေတယ်၊ ဟန်ဆဲလ် က ပြတင်းပေါက်ကနေ အပြင်ကို မျှော်ကြည့်နေတယ်၊ ဂရဲတဲလ်က တယောက်တည်း လှည့်ပတ်ကနေရာကနေ “မောင်လေးရေ မမနဲ့လာကပါလား၊ ပျော်စရာပါကွယ် လာပါ” လို့ ခေါ်နေတာကိုး၊ ဟန်ဆဲလ်လည်း သူ့အမကိုကြည့်ရင်း စိတ်ပါလာတာနဲ့.. ”အေးပါ မမရဲ့ကမှာပေါ့” ဆိုပြီး အပြေးကလေး တွဲကတော့တာပေါ့။
ရှေးရှေးတုံးက ရွှေယုန်နဲ့ ရွှေကျား ဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်း အကောင် ၂ကောင်ရှိကြတယ် တဲ့၊ ရွှေယုန်က ပညာဥာဏ်အမျှော်အမြင်ကြီးပြီး ကောက်ကျစ်တဲ့ စိတ်ရှိတယ်၊ ရွှေကျားကြီးကတော့ သိပ်ရိုး သိပ်အ သတဲ့၊ သူက ဘာမှ မစဉ်းစားဘူး၊ သူများပြောတိုင်း ယုံတတ်တယ်၊ တစ်နေ့တော့ ....ရွှေယုန်နဲ့ရွှေကျား တို့ နှစ်ကောင်သား လမ်းမှာဆုံကြသတဲ့၊ ဒီတော့ “မိတ်ဆွေ ယုန်ကလေးရေ... အသင် ဘယ်ကိုများသွားမလို့ လဲ” လို့ နှုတ်ဆက်မေးမြန်းသတဲ့၊ ဒီအခါမှာ အလွန်အကြံကြီးပြီး သူတပါးကို ချလေ့ရှိတဲ့ ရွှေယုန်က “သက်ကယ်ရိတ်သွားမလို့၊ မိတ်ဆွေ ကျားကြီးရေ ... လိုက်ခဲ့ပါလားဗျ” လို့ သွေးဆောင်ခေါ်ငင်သတဲ့၊ ရွေှ့ကျားလဲ မနေသာပဲ လိုက်ရတာပေါ့၊ ထမင်းထုပ်ကလေးတွေ ကိုယ်စီနဲ့ပေါ၊ သက်ကယ်ရိတ်ထွက်လာကြရော ဆိုပါတော့၊ ဒါနဲ့သက်ကယ်တောထဲ ရောက်ရော၊ ရွှေကျားကတော့ နေမပူခင် အလုပ်ပီးအောင်ဆိုပီး ကြိုးကြိုးစားစား လုပ်သတဲ့၊ ထမင်းလဲ မစားသေးဘူး၊ အထုပ်ကလေးဘေးမှာချပီး သက်ကယ်ရိတ်နေတာကွဲ့၊ ရွှေယုန်ကတော့ ဘယ်ဒီလိုဟုတ်မလဲ၊ သူ့ကိုယ်သူ ပညာရှိဆိုပီးတော့ ရွှေကျားအပေါ် အမြဲ အသာစီးယူတယ်၊ နောက်ပီး ထမင်းထုပ်တွေဖြည်စားတော့တာပဲ၊ ရွှေကျားအထုပ်ကိုပါ ပြောင်သလင်းခါအောင်စားတာ၊ စားပြီး ရွှေကျားထမင်းထုပ်ထဲကို နောက်ချေးတွေရယ် သလဲ တွေရယ် ထည့်ထားသတဲ့၊ ထည့်ပြီး နောက်ကျရင် နောက်ချေးနဲ့ သလဲပဲ စားရမယ်ဗျို့ လို့အော်ဟစ်ပြောလိုက်သေးတာကွဲ့ ၊ ရွှေကျားတို့ အ ပုံများ .. ရွှေယုန်က သူ့ ကို ကျီစယ်တယ်ထင်နေတာ။
ကျွန်မငယ်ငယ်က ပုံပြင်တွေနားထောင်ရတာ သိပ်ကြိုက်ပါတယ်၊ ကျွန်မမေမေ က ပုံပြောသိပ်ကောင်းတယ်၊ အဲဒီတုန်းက ကျွန်မက ပုံပြင်နားထောင်သူပေါ့၊ နောက်တော့ ကျွန်မမှာ တူလေးတစ်ယောက်ရလာခဲ့တယ်၊ တူလေးအတွက်တော့ ကျွန်မက ပုံပြင်ပြောတဲ့သူ ဖြစ်သွားပြန်ရော၊ ကျွန်မပြောတဲ့ ပုံပြင်တွေက မေမေပြောပြဖူးတဲ့ ဖားမရုပ်ဆိုးလေး၊ မြွှေမင်းသား၊ မောင်နီ မစီ၊ လိပ်ကမ္ဘာမကြီး အဲဒီပုံပြင်တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊ ကျွန်မက တူလေးကြိုက်တဲ့ စူပါမင်း၅ယောက်ကို၊ ကာတွန်းအောင်ရှိန် ဇာတ်ကောင် တီထွင်ပါရဂူဖိုးဆိတ်ဖြူ၊ ကိုပူစီ၊ မောင်စူပါ၊ ဦးစိတ်တို မျောက်ညို၊ သူတို့ တွေအားလုံးနဲ့ ပေါင်းပြီး ကြုံသလိုဇာတ်လမ်းဆင်ပြောပြလိုက်တာ၊ တူလေးက ရယ်စရာ အင်မတန်ကြိုက်တယ်၊ ကျွန်မလိုပဲ ဂြိုဟ်သားတွေ ပန်းကန်ပြားပျံတွေလည်း သိပ်ကြိုက်တယ်၊ အဲဒါတွေအကုန်လုံးကို ပေါင်းထည့်ပြီး ရယ်စရာဖြစ်အောင်ပြောရတာပါပဲ၊ “ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ရှေးရှေးကြီးတစ်ကောင်ရှိတယ်” လို့ စပြောတာနဲ့၊ တူလေးက “အန်တီပကလည်း လုပ်ပြီ” ဆိုပြီး တခွီးခွီးရယ်တော့တာ၊ ကျွန်မက လျှောက်ပြောလည်း တူလေးကတော့ သဘောတွေကျ၊ အိပ်ရာဝင်ခါနီး မအိပ်နိုင်ပဲ တခွိခွိလုပ်နေလို့ တူလေး မေမေက “သားလေး အိပ်တော၊့ အိပ်တော့” လို့ သတိပေးရတဲ့ ညတွေလည်းမနည်းပါဘူး၊ တူလေးနဲ့ ပုံပြောပြဖူးတဲ့ ညတွေအကြောင်းပြန်စဉ်းစားမိတော့ ကျွန်မနားထောင်ခဲ့ရဖူးတဲ့ မေမေ့ရဲ့ပုံပြင်ပြောတဲ့ညတွေဆီကို အတွေးတွေက ရောက်သွားလိုက်တာ ...
Posted by PhyoPhyo at Friday, October 15, 2010 Labels: ပင်ကိုရေးဆောင်းပါး, တော်လှန်ရေးသမား၊ အကြမ်းဖက်သမား .. ဘယ်လိုကွာခြား
တော်လှန်ရေးသမားတစ်ဦးနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတစ်ဦးရဲ့ကွာခြားချက်အစစ်အမှန်တွေကို လူနည်းနည်းကပဲ နားလည် ကြပါတယ်၊ ဖြစ်ရပ်တွေအများကြီးမှာ တော်လှန်ရေးသမားကို အကြမ်းဖက်သမားတစ်ယောက်လို့ တံဆိပ်တပ်လိုက်ကြ တယ်၊ အပြန်အလှန်အားဖြင့် အကြမ်းဖက်သမားကို တော်လှန်ရေးသမားလို့ ထင်မြင်ယူဆကြတယ်၊ တကယ်တမ်းမှာ အဲဒီအခေါ်အဝေါ်နှစ်ခုအချင်းချင်း ကွာခြားချက်ကဆန့်ကျင်ဘက်ပါ၊ တော်လှန်၊ အကြမ်းဖက် ဒီအမျိုးအစားနှစ်ခုလုံးရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေကိုအဆုံးအဖြတ်ပေးတဲ့ အခြေခံစည်းမျဉ်းတွေဟာ အင်မတန်ကွဲပြားနေကြပါတယ်။
ရိုးရိုးရှင်းရှင်း အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင် အကြမ်းဖက်သမားတစ်ဦးဟာ တခြားလူတွေ၊ ဂိုဏ်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အစိုးရတွေကို သူတို့ရဲ့ လူမှုရေး၊ နိုင်ငံရေးရည်မှန်းချက်တွေအတိုင်း လက်ခံလိုက်နာလာအောင် တရားဥပဒေနဲ့ မညီတဲ့ အားကိုသုံးမယ်၊ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တယ်၊ အတင်းအဓမ္မတိုက်တွန်းတယ်၊ အကြမ်းဖက်သမားတစ်ဦးဟာ သူလက်ခံထားတဲ့အဆင့်ကိုရဖို့ လှုပ်ရှားမှုအမျိုးမျိုးထဲက နည်းတစ်ခုခုနဲ့ကြိုးစားတယ်၊ ကျုးလွန်တယ်၊ သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေရဲ့အချိန်အများစုမှာ ဥပဒေကနေ ဆန့်ကျင်ဖောက်ထွက်နေကြတယ်။
အဓိကရုဏ်းဖန်တီးချင်သူတွေအတွက် ဆင်ခြေတစ်ခု (သို့မဟုတ်)ဂေးများရဲ့စီတန်းလှည့်လည်မှု
Posted by PhyoPhyo at Monday, October 11, 2010 Labels: ပင်ကိုရေးဆောင်းပါး, ဂေးများရဲ့စီတန်းလှည့်လည်မှု
ခေတ်တွေ စနစ်တွေ နိုင်ငံတိုင်းမှာပြောင်းလဲလာကြတယ်၊ ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်၊ လူတိုင်း ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် ရှိသင့်ကြပါတယ်၊ တစ်ခုခုကို “ကြောက်လို့လုပ်ရခြင်း၊ ကြောက်လို့ မလုပ်ရခြင်းတွေက” ပြောင်းလဲလာတဲ့ ခေတ်မှီကမ္ဘာကြီးထဲမှာ မရှိသင့်တော့ပါဘူး၊ လူသားတွေမှာ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ homosexual ဆိုတာတွေ ယေဘူယျ ရှိနေပါတယ်၊ နိုင်ငံတိုင်းမှာ ရှိနေကြတယ်၊ ဂေး(ယောက်ျားချင်းသာစိတ်ဝင်စားသူ)တွေလည်း လူပါပဲ၊ နောက် အမျိုးသမီးချင်းသာစိတ်ဝင်စားကြသူတွေ၊ သူတို့တွေဟာ တကယ်တမ်းတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အားနည်းမှုရှိနေကြသူတွေပါ၊ သူတို့ရဲ့ ရပ်တည်မှုကို လူသားထဲက လူသားတွေ အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသင့်ကြပါတယ်၊ တန်းတူ အခွင့်အရေးပေးသင့်ကြပါတယ်၊ နောက်ဆုံး အသိအမှတ် မပြုချင်ရင်တောင်မှ ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်ဖို့ မလုပ်သင့်ပါဘူး၊ တစ်ဦးတည်းအမြင်နဲ့ အသိအမှတ်မပြုချင်ရင် ကိုယ်တစ်ဦးတည်း အမြင်နဲ့ ကြိုက်သလို နေနိုင်ကြပါတယ်၊ ဒီမိုကရေစီဘက်ကို ခြေဦးလှည့်နေကြပါပြီဆိုတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတောင် သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်အစိုးရက သူတို့တွေရဲ့ တည်ရှိမှုကိုတရားဝင် ခွင့်ပြုထားပေမဲ့ အစွန်းရောက်ဘာသာရေးသမားတွေနဲ့ တစ်ချို့ အကြမ်းဖက် တိုက်ခိုက်လိုသူတွေက ဆန့်ကျင်လိုကြတယ်၊ အောက်တိုဘာ ၁၀ရက်တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ဆားရ်ဘီးယားနိုင်ငံ၊ ဘဲလ်ဂရိတ်မြို့ရဲ့ မြို့လည် City Center ရင်ပြင်တ၀ိုက် ဂေးများစီတန်းလှည့်လည်ခြင်း (ဂေးပရိတ်) ပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်၊ ဒီ စီတန်းလှည့်လည်မှုကို ဆန့်ကျင်တဲ့ဘာသာရေးအစွန်းရောက်လွန်းသူတွေနဲ့ မိသားစုတန်းဘိုးထားသူတွေက အန်တီဂေးပရိတ် တစ်ခုကိုလည်း စနေနေ့မှာတစ်ရက်စောပြီး ဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြလိုက်တယ်။
“ဂေးတွေ မြို့ထဲ စီတန်းမလှည့်နိုင်ဘူး” တဲ့
Posted by PhyoPhyo at Friday, October 08, 2010
Posted by PhyoPhyo at Thursday, October 07, 2010 Labels: ပင်ကိုရေးဝတ္ထုတို
ဒီကောင်တွေက ခပ်ဆိုးဆိုးပါ၊ ကျွန်တော်လည်း လိမ္မာတဲ့သူတော့ မဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်ဆိုးတာထက် သူတို့က ပိုဆိုးတယ်၊ ကျွန်တော်ကတော့ လူ ဆိုတော့၊ “လူ”ဆိုး ဆိုးတယ်ပေါ့ဗျာ၊ သူတို့က ခွေးတွေ၊ လမ်းပေါ်ကခွေးတွေ၊ ဆိုတော့ “ခွေး”ဆိုး ဆိုးတယ်၊ ခွေးဆိုတဲ့ အတိုင်း ကိုက်တယ်၊ ဆွဲတယ်၊ ဟောင် တယ်၊ ၀ရုန်းသုန်းကားဖြစ်အောင်လုပ်တယ်၊ သူတို့ကို လူတွေကမုန်းကြတယ်၊ သူတို့ကိုမုန်းတဲ့သူတွေကို ကျွန်တော်ကမုန်းတယ်၊ သူတို့က ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကိုမုန်းတယ်၊ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့တွေ အမုန်းသံသရာနေ့ရက်တွေထဲ ဗရုတ်ဗရက်ဖြတ်သန်းနေကြတုန်းပဲ၊ ပြေးတဲ့အခါပြေးတယ်၊ လိုက်တဲ့အခါ လိုက်တယ်၊ ခြောက်တဲ့အခါခြောက်တယ်၊ ငေါက်တဲ့အခါငေါက်တယ်၊ တောက်ခေါက်တဲ့လူတွေ၊ တုတ်ဆွဲတဲ့သူတွေ၊ မျက်စိပြူးပြလေ့ရှိတဲ့ ပြူးပြူးပြဲပြဲလူတွေ၊ စက်သေနတ်ကကျည်တွေလွှတ်သလို စကားလုံးတွေ တဒုတ်ဒုတ် ပစ်လွှတ်တဲ့သူတွေ ဒီလိုလူတွေကို သူတို့ ခါးခါးသီးသီးမုန်းတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Thursday, October 07, 2010 Labels: အထွေထွေမှတ်စု
ကမ္ဘာစိုးမင်း (Kabar Soe Min)ရဲ့ကဗျာလေးပါ၊ facebook မှာတင်ထားတာဖတ်ရရင်း သဘောကျလွန်းလို့ ပြန်ပြီး ဝေမျှပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့အားလုံး ရန်ကုန်မှာ ပြန်ဆုံကြဖို့လေ။﻿
Posted by PhyoPhyo at Tuesday, October 05, 2010 Labels: ဟိုဟို ဒီဒီ
စိတ်မကောင်းလိုက်တာ၊ ဖြူဖြူ ဒီနေ့ပဲ သေသွားပြီ၊
နောက်တစ်ကြိမ် စလို့လည်း မရတော့ပါဘူး၊
ညက တစ်ညလုံး အသံ အဆန်းနဲ့ အော်နေတာ၊ ကွီ ကွီနဲ့၊ ဆေးခန်းသွားပြတော့ အဆုတ်မကောင်းလို့၊ ကျွေးရမယ့်ဆေးတွေပေးလိုက်ပြီး အပြန်လမ်းမှာပဲ သေသွားတယ်။
RIP Phyu Phyu !!
ဖြူဖြူ မတိုင်ခင် နဲရှော တူလေးရဲ့ ခွေးမလေး မက်ဂီလည်း သေသွားပြန်တယ်၊ ခုတစ်လော သေခြင်းတရားတွေနဲ့တွေ့နေရတယ်၊ အကောင်ပလောင်လေးတွေရဲ့ သေခြင်းတရားတွေပေါ့၊
မက်ဂီ မသေခင်ရက်ပိုင်းကပဲ အခန်းထဲအိပ်ရာပေါ်တက်ဆော့နေလို့ ဓါတ်ပုံရိုက်ဖြစ်လိုက်သေးတယ်။
RIP Maggi !!
သေခြင်းတရားတွေ ခုတလောတွေ့နေရတာနဲ့ “ကျွန်တော်သေတဲ့အခါ” ဆိုပြီး ငါသေရင်တော့ ဟိုလိုလုပ်မယ်၊ ဒီလိုလုပ်မယ်နဲ့ လျှောက်ရေးခဲ့ဖူးတာ ပြန်အမှတ်ရမိတယ်၊ တကယ်ကြီး အဲလို လုပ်ချင်မိပါတယ်၊ တကယ် သေရင်သာ ဘယ်လိုသေရမယ်မသိဘူး၊
ပိုစ့်အဟောင်းကို ဒီမှာ ပြန်တင်ပါတယ်၊ သေတာတွေ စုထားတဲ့ သဘောပေါ့။
Posted by PhyoPhyo at Monday, October 04, 2010 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
~ I have no choice ~I hear your voice ~
Likeaprayer နားထောင်တိုင်း၊ ပြန်ကြည့်တိုင်း ကြိုက်တုန်းပဲ၊ မက်ဒေါနားပဲကြိုက်ပါတယ်၊ Mad' House Likeaprayer တော့ မကြိုက်ဘူး၊ မက်ဒေါနားလည်း အဖြူ၊ အမဲ သင့်မြတ်ရေး လုပ်ခဲ့တာပဲနော်၊ ဒါမှမဟုတ် ခွိုင်ယာဆိုရင် လူမဲ တွေက ပိုပြီး အဆိုကောင်းလို့ထင်တယ်။
Posted by PhyoPhyo at Monday, September 20, 2010 Labels: ဟိုဟို ဒီဒီ
ချစ်စရာ .. သနားစရာ .. ရယ်စရာ
fb မှာ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် share ထားတာတွေ့လို့ပါ။
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, September 15, 2010 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
စစ်ပွဲတွေအကြောင်းဖတ်ရတာ ကိုယ့်ဘာသာတောင် ခေါင်းမူးလာတယ်။
အဲဒါနဲ့ပဲ ... သီချင်းနားထောင်ရပြန်ရော
ငယ်ငယ်ကကြားဖူးတာ .... အဲဒီလို
♫ ခဏလေးပါ ရပ်ပါဦးလို့ ကျွန်မအိမ်ရှေ့မှာ.. (ရပ်)
ဒီလိုနေ့တိုင်းနေ့တိုင်း စောင့်စားနေ .. (လွမ်းဆွေး)
သနား သနား ရင်မှာ သနား ..
စာတွေစစ်ကြည့်ပါဦးနော် မှားသွားမှာ သိပ်ကြောက် ♫
♫ စာရောက်မယ့်ရက် စောင့်နေရင်း ..
စိတ်မှာတုန်လှုပ် စိတ်မထိန်းနိုင် ..
သ်ိပ်ကိုဆိုးတယ် မဖြစ်နိုင် ..
စောင့်ခဲ့ ရက်လ နှစ်များ ကြာညောင်း ♫
♫ ဟေ .. ဒီမှာ မင်းစာ ရောက်လာပြီ ..
ဒီလို ပြောမလား ... ♫
♫ စက်ဘီး ကို ခဏလောက်ရပ်လို့ .. ခဏလောက်ရပ်လို့ ♫
ဟေး .. ဟေး .. ဟေး Mr.Postman ♫
ဘယ်သူဆိုတာလည်း မသိတော့ပါဘူး၊ ငယ်ငယ်ကတော်တော် နာမည်ကြီးခဲ့တာ။
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, September 15, 2010 Labels: ပင်ကိုရေးဆောင်းပါး, ပန်းချီ/ဓာတ်ပုံပြပွဲများ, ပျောက်ဆုံးနေသော ဘ၀များ
Missing Lives Photo Exhibition Kalemegdan Fortress, in front of Cvijeta Zuzoric Gallery
International Committee of the Red Cross (ICRC) က စီစဉ်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ Missing Lives ဓါတ်ပုံပြပွဲကို အခုအခါ ပန်းခြံအဖြစ်ပြသဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ကလဲမက်ဂ်ဒန်ခံတပ်(Kalemegdan) မှာ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့ကစတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ သြဂုတ်လ ၃၀ ရက်နေ့ - အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပျောက်ဆုံးသူများနေ့ (International day of Disappeared) အတွက်ပြသခဲ့တယ်၊
Missing Lives ဓါတ်ပုံပြပွဲအစီအစဉ်များ
ဘဲလ်ဂရိတ် - ၂၃ သြဂုတ် - ၆ စက်တင်ဘာ – Kalemegdan Fortress, in front of Cvijeta Zuzoric Gallery
ဆာရာရေဗို - ၃၀ သြဂုတ် - ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀ – Trg Djece Sarajeva
ပရစ်တီးနား - ၁၄ - ၂၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၀ - Mother Theresa square
မိုစတား - ၂၀ စက်တင်ဘာ - ၄ အောက်တိုဘာ – Spanski Trg
ဘန်ရာလူကာ - ၁၁ - ၂၅ အောက်တိုဘာ – Bana Milosavljevica
ဇာဂရက်ဘ် - ၁ - ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၀ – Trg Strossmayer
စထရပ်စ်ဘော့ဂ် - ၄ - ၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၀ – Building of the Council of Europe
ဘရပ်ဆဲလ်စ် - ၂၅ အောက်တိုဘာ - ၆ နိုဝင်ဘာ – Place du Luxembourg (in front of the European Parliament)
အော့တ၀ါ - ဇန်န၀ါရီ - ဧပြီ ၂၀၁၁ – Canadian War Museum
ဘန်း - သြဂုတ် - စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ *
အဲဒီဓါတ်ပုံပြပွဲကပြောပြတဲ့ ပျောက်ဆုံးနေသောဘ၀များအကြောင်းတွေကို ပြန်လည်မျှငေပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, September 08, 2010 Labels: ခရီးသွားဆောင်းပါး, တီတိုရဲ့ ဂူဗိမာန်
ပန်းချီပြခန်းကနေ နီးတယ်ဆိုပြီးသွားကြည့်တော့ ၊အချိန်က နာရီဝက်လောက်ပဲရတော့တယ်၊ ညနေ ၄နာရီခွဲမှာ ပိတ်တော့မှာတဲ့၊ ပန်းချီပြပွဲမှာ နေ့လည်ပိုင်းလောက်ထဲက ရောက်နေကြပေမဲ့ အဲဒီမှာပဲ ပန်းချီကားတွေ သေချာလိုက်ကြည့်နေတာနဲ့ အချိန်ကတော်တော်ကုန်သွားတာကြတယ်၊ တီတို ကို ဒီတိုင်းပြည်ကလူတွေက ဆလိုဘော်ဒန် မီလိုရှဗစ်ခ်ျ ထက်ပိုပြီး အလေးထားကြတယ်၊ သူရဲကောင်းတစ်ဦးလိုချစ်ကြတယ်၊ တီတိုအကြောင်းတသသ ပြောကြပါတယ်၊ တီတို အသက်ထင်ရှားရှိစဉ်တုန်းက နိုင်ငံအတော်များများကို ချစ်ကြည်ရေးတွေသွားခဲ့တယ်၊ နိုင်ငံတွေအများကြီးက လက်ဆောင်တွေလဲ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်၊ အချိန်က မရတော့ အမြန်ပြေးကြည့်ရင်း၊ အမြန်ရိုက်ရင်း ပတ္တလားတွေ့တော့.. ဟာ .. အဲဒါ မြန်မာမှာလဲရှိတယ်၊ ပတ္တလားလို့ခေါ်တယ်၊ မြန်မာတူရိယာတစ်မျိုးလို့ နဲရှောကိုပြောပြနေရင်းမှ .. တကယ်ကြီး မြန်မာ့ပတ္တလားဖြစ်တော့တာကိုး၊ မြန်မာနိုင်ငံကလက်ဆောင်ပေးထားတာမှန်းသိလိုက်ရတယ်၊ အချိန်မရလို့ အမြန် အမြန်ကြည့်ရလို့ပါ၊ စာကိုအရင်မဖတ်ဖြစ်လိုက်တာ၊ ပြောလို့မရဘူးလေ၊ တချို့နိုင်ငံတွေလည်း ပတ္တလားလို လုပ်ပြီးတီးရင်တီးမှာပေါ့၊ မဟုတ်ဘူးလား။
Posted by PhyoPhyo at Wednesday, September 08, 2010 Labels: ဒါလီ ရဲ့ Divine Worlds, ပန်းချီ/ဓာတ်ပုံပြပွဲများ
စပိန်ပန်းချီဆရာကြီး ဆာလ်ဗာဒိုဒါလီဲရဲ့“Divine Worlds" ပန်းချီပြပွဲကို စက်တင်ဘာ ၃ရက်နေ့ကနေပြီး နိုဝင်္ဘာ ၁၄ရက်နေ့အထိ တနင်္လာနေ့မှအပ နေ့တိုင်း ဘဲလ်ဂရိတ် Museum History of Yugoslavia(MIJ)မှာ ပြနေပါတယ်၊ ဒါလီရဲ့လက်ရာ ဂရပ်ဖစ်ကားပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ပြထားတယ်၊ Biblia Sacra and Divine Comedy ရုပ်ပုံလက်ရာတွေပါ၊ စနေနေ့က သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
နှစ်ထပ်အဆောက်အဦ အပေါ်ထပ်မှာ ပြထားပါတယ်၊ အ၀င်ဝမှာ သူ့ရဲ့အမှတ်တံဆိပ် ပန်းပုရုပ်လို့နာမည်ကြီးတဲ့ မဲဝက်စ်နှုတ်ခမ်းဆိုဖာချထားပြီး ဘယ်ညာ ၀င်ပေါက်၊ ထွက်ပေါက်ထားပေးထားတယ်၊ ၀င်ကြေးက ဒီနာ ၄၅၀ (ယူအက်စ်၅ဒေါ်လာကျော်ကျော်)၊ ကျောင်းသူကျောင်းသား၊ ပင်စင်စားနဲ့ ၁၀နှစ်အောက်ကလေးငယ်တွေက ဒီနာ၃၀၀ပဲပေးရပါတယ်၊ ၀င်ဝင်ချင်း ထင်းနေအောင်မြင်ရတာက ဒါလီရဲ့ timeline ပါ၊ ခုနှစ်တွေနဲ့ သူရဲ့ အလုပ်တွေ ရေးထားပါတယ်၊
Posted by PhyoPhyo at Thursday, September 02, 2010 Labels: သိပ်ကြိုက်တဲ့သီချင်းတွေ
♫♥ ပျို ပျိုခင် မေတ္တာရွှေလက်ဆောင် ♫♥ ထာ ထာဝစဉ် သစ္စာသွေမပျက်ပေါင် ♫♥
♫♥ သေအတူ ရှင်မကွဲ ရိုးမြေကျအောင် ဆယ်ကမ္ဘာကုန်သော်လည်း ချစ်မယ်မောင် ♫♥
လိုက်ဆိုကြည့်တာ အသံတောင်ဝင်တယ် :D
Posted by PhyoPhyo at Saturday, August 28, 2010 Labels: ဟိုဟို ဒီဒီ